T'Challa's အဖွဲ့မှပြန်လည်တည်ဆောက်သည် Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? LEGO ၌
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 293 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego Marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ယွန်ဒူး
ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? Star-Lord နှင့်သူ၏အဖွဲ့၏အခြားဗားရှင်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားပြန်လည်ဖန်တီးရန်လမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည် 71031 Marvel စတူဒီယို'လွှတ်တင်။
Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? ယခုထုတ်လွှင့်ပြသနေသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲများမှဇာတ်လမ်းတွဲများကိုဇာတ်ကွက်တစ်ခုချင်းစီကိုအနီးစပ်ဆုံးကြည့်။ ၎င်းကို minifigures အဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားသည်။
T'Challa Star-Lord သည်ပြပွဲအတွက်နောက်ဆုံးအပိုင်းကို ဦး တည်နေသော်လည်းနေရာတစ်ခုရှိသည်။ 71031 Marvel စတူဒီယိုမင်းရဲ့ Ravager အဖွဲ့သားတွေကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီဖို့အရင်တုန်းက minifigures အဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြန်လာတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရှိတယ်။ What If အတွက်ဝင်လာသော spoilers များအတွက်သင်၏သတိပေးချက်အဖြစ်ယူပါ။ ဒုတိယပိုင်း
Yondu သည် Wakandan ကလေးအား Peter Quill အတွက်မှားသည်ဟုယူဆပြီးနောက် T'Challa ၏အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသောဖခင်ဖြစ်သည်။ grizzled ဇာတ်ကောင်တွင်အပ်နှံထားသော minifigure တစ်ခုနှင့်အပိုင်းသစ်တစ်ခုသာရှိသည်။
Yondu ၏တစ် ဦး တည်းသောအသေးအဖွဲပုံကို ၇၆၀၈၀ Ayesha's Revenge ၌ Galaxy Vol of Guardians ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များ၏လှိုင်းများမှတွေ့နိုင်သည်။ ၂။ မော်ဒယ်ကအခုအငြိမ်းစားယူနေပေမဲ့ ၂၀၁၇ မှာမယူခဲ့တဲ့သူတွေသူ့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် အုတ်ခဲ ပေါင် ၄၅ ၀ န်းကျင်
၏အဓိကအချိန်ဇယား၌နေစဉ် Marvel Cinematic Universe Taserface သည် Yondu ကိုဆန့်ကျင်သောတော်လှန်မှုတစ်ခုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်၊ ဤရွေးချယ်စရာဗားရှင်းသည်သေးငယ်သောပုံတစ်ပုံသာရှိသည်။
ရုပ်ရှင်များတွင်ဇာတ်ကောင်အနည်းငယ်၏ပါဝင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် Taserface သည် 76079 Ravager Attack တွင်သီးသန့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။art 76080 Ayesha ၏ကလဲ့စားချေခြင်းနှင့်တူညီသောလှိုင်း၏ Yondu နှင့်မတူဘဲ Taserface သည်ပရိတ်သတ်များအတွက်များစွာကုန်ကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အုတ်ခဲ ပျမ်းမျှစျေး ၈ ပေါင်နှင့်
Knowhere ဓါးပြတိုက်မှု၏နှစ်ဆဖြတ်ကူးသူအဖြစ် Nebula ကိုလည်းစိတ် ၀ င်စားသူတစ် ဦး အဖြစ်အကြံပြုသည်artT'Challa ရဲ့ ner နဲ့ Galaxy ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ Guardian's ရုပ်ရှင်တွေမှာငါတို့မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အများကြီးကွာခြားပါတယ်။ Nebula သည် ၇၆၀၂၀: Knowhere Escape Mission တွင်ထင်ရှားသောသူမ၏အကျော်ကြားဆုံး ၀ တ်စုံများနှင့်မပြသခဲ့သည့်နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်သေးငယ်သည့်ရုပ်ပုံများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
BrickLink တွင် older ၁၈ ခန့်အတွက်ရနိုင်သောအသက်ကြီးခြင်း၊ ဦး ခေါင်းကိုသာဂရုစိုက်သောသူတို့သည် minifigure ကိုအမှတ်ပေးနိုင်သည်။ Marvel 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ ပေါင် ၈ အောက်သာ ထိုကဲ့သို့သောအစုံများမှရွှေရောင်ဆံပင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် နှင့် Heist Nebula ပြည့်စုံသည်
ဒုတိယမြောက် What If ... ? T'Challa သည်အရူး Titan Thanos ကိုတည်ငြိမ်အောင်စီမံပြီးသူ့ကိုကောင်းဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ဒီနတ်မင်းကြီးဇာတ်ကောင်သည် p အဖြစ်ဗားရှင်းအသစ်ကိုမကြာသေးမီကရရှိခဲ့သည်art Infinity Saga လှိုင်းအုပ်စုအသစ်များမှ
နောက်ဆုံးပေါ် (ပြောင်သည်) Thanos bigfig ပေါ်လာသည် 76192 Avengers: Endgame Final Battle, ယခု £ 79.99 / $ 69.99 / € 89.99 အတွက်ရနိုင်သည်။ ဇာတ်ကောင်သည်ပြပွဲတွင်ဤမျှလောက်သောသံချပ်ကာကို ၀ တ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း Thanos ၏အကောင်းဆုံးပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းသည်သေချာသည်။
အနည်းဆုံး (minifigures ပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များအတွက်) အဖွဲ့ကို ၀ န်းရံပါ။ T'Challa Star-Lord သည် p အဖြစ်ပါ ၀ င်ရန်အဆင်သင့်art of 71031 Marvel စတူဒီယို - ပထမဆုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား superhero theme အတွက်
ငါတို့မှာရှိတယ် သုံးသပ်ချက်နှင့်ပြခန်းအပြည့်အစုံ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင်သူတို့၏ဖြန့်ချိမှုမတိုင်မီသင်စူးစမ်းရန်အပိုင်း ၂ ခုလုံးကိုပြောပါသေးသည်။ ပြောစရာများစွာရှိသည့်သေးငယ်သည့်ပုံသေးသေးလေးများနှင့်သူမပါ ၀ င်ပါ။
← LEGO တစ်ခု Minions The Rise of Gru မထွက်ခင်မှာ set ကအနားယူနေတယ်
အားလုံးသိပြီးသား DLC သည် LEGO သို့ရောက်လာသည် Star Wars: Skywalker Saga →